I-FUN Penthouse suite eduze ne-TLV & Airport - I-Airbnb
I-FUN Penthouse suite eduze ne-TLV & Airport
Ganei Tikva, Center District, kwa-Israel
I-ikamelo lezivakashi ephelele ibungazwe ngu-Dana
I-penthouse suite eyingqayizivele yobuciko nebanzi enokubukwa kwezindawo zepaki.
I-penthouse itholakala phezulu kwe-Villa enkulu, indawo yesibili yokuhamba ukhululekile, enikeza indawo yokupaka yamahhala ene-winch kagesi yokuthwala yonke impahla yakho phezulu.
Isendaweni emaphakathi edolobheni elithulile elinokufinyelela okuqondile kuyo yonke imigwaqo emikhulu kanye nezinto zokuhamba zomphakathi ezinhle namatekisi.
Jabulela idolobha nokuthula ngebanga lokuhamba uye ezitolo ezinkulu, izitolo zekhofi, indawo yokuzivocavoca, amachibi okubhukuda, izitolo ezinkulu.
Izivakashi zethu zithanda nje idizayini & nemvelo ethandekayo nezingadi & nokungenisa izihambi!
Indawo enhle evulekile, enobuciko, enefenisha ephelele futhi ehlome nge-Penthouse suite enokubukwa kwe-panoramic park engu-180 enethala Elikhulu elibheke ipaki elinombhede welanga, indawo yokuhlala & indawo yokosa inyama. vuka uhlabe ingoma yenyoni!
Ukufinyelela kungokungena okuyimfihlo, ukuhamba kwesitezi sesi-2 ukhuphuka unikeza indawo yokupaka yamahhala enesango eduze komnyango wangaphambili. Kukhona iwintshi kagesi yokuthwala yonke impahla yakho uye phezulu...
Izungezwe izihlahla zezithelo zemvelo nezimbali endaweni enokuthula eqhele ngamakhilomitha ayi-10/7 ukusuka eTel Aviv.
I-Penthouse itholakala edolobheni elincane: i-Ganei Tikva enokuxhumeka kwemizuzu emi-5 kuyo yonke imigwaqo emikhulu: akukho 4./north, no 1./Jerusalem, 20 min drive to Tel aviv (ungapaka imoto yakho "Park&Go" futhi usebenzise izithuthuthu zasedolobheni noma uthathe ulayini ongu-nu 256 nje imizuzu emi-3 uhamba usuka ...uqonde e-Tel Aviv & nolwandle), Ifulethi lisedolobheni elincane: I-Ganei Tikva enoxhumano lwemizuzu emi-5 kuyo yonke imigwaqo emikhulu: no-4. /enyakatho, no-1./Jerusalema:
I-Bar Ilan University (4.5km/2.8mi), isikhungo sezokwelapha sase-Sheba: 5km/3mi
Futhi imizuzu emi-5 ukushayela ukuya ePetach Tikva (4.5km/2.8mi) naseKiryat Ono, isikhungo sezokwelapha saseRabin (6km/3.7mi) nawo wonke amadolobha amakhulu aseduze.
Lena indawo yakho Ephelele/empambana mgwaqo ukuze uhlale kahle kwa-Israel.
I-penthouse ingahlalisa abantu abangafika kwabangu-4 emakamelweni angu-2, umbhede ongu-1 ophindwe kabili@ Igumbi lokulala eliyimfihlo elinomnyango okhiyiwe kanye nombhede ongusofa othokomele ongu-1+ umbhede owodwa @ igumbi lokuhlala elikhulu.
Ikhishi elihlome ngokuphelele elinebha yamanzi ashisayo / abandayo futhi ligcwele cishe yonke into oyidingayo ukuze uhlale, uma udinga noma yini enye sizobe sikhona ...
Izinsiza zifaka phakathi: i-cable TV, i-WIFI, i-Aircon/heating, iwasha nokomisa, ithala elihle lokubuka ipaki elinezindawo zokosa inyama noma vele uphumule futhi ujabulele imibhede yethu yokushuka bese uhlela uhambo lwakho e-Tel Aviv nakwezinye izindawo kwa-Israel...
Lena indawo Yakho ekahle yokuhlola u-Israyeli!
I-HDTV engu-75" ene- I-Amazon Prime Video, Apple TV, I-Chromecast, I-Netflix, I-Roku, Isevisi evamile ye-cable kamabonakude
Jabulela idolobha nokuthula, i-Penthouse izungezwe izingadi futhi iseduze neTel Aviv futhi ithola cishe yonke into oyidingayo ukwenza iholide lakho libe mnandi.
Ukuhamba ibanga lokuya enxanxatheleni yezitolo, izitolo zekhofi, izitolo ezinkulu, indawo yokubhaka, izitolo ezinkulu, iklabhu yezwe, amachibi okubhukuda, i-SPA & massage nokunye...
Ukuvusa izingoma zezinyoni nokuhlala endaweni eluhlaza edolobheni elincane: I-Ganei Tikva, ephakathi nendawo yakho konke!
Hi, I like traveling, colors adventures, art and innovation... I put a lot of efforts to make my airbnb apartment as comfortable and inspiring as possible Being host is precious and i'm excited to meet guests from all around the globe Best & Carpe diem Dana
Hi, I like traveling, colors adventures, art and innovation... I put a lot of efforts to make my airbnb apartment as comfortable and inspiring as possible Being host is precious an…
Sizobe sikhona ngenxa yakho futhi sihamba ngaphezu kwalokho ukuze sihlangabezane nezidingo zakho.
Uma udinga ukwelulekwa noma yini enye, zizwe ukhululekile ukusithinta komunye umnyango we-villa noma uthumele umbhalo noma ushayele ....
Sihlonipha kakhulu ubumfihlo bakho
Uma udinga ukwelulekwa noma yini enye, zizwe ukhululekile ukusithinta komunye…
Izilimi: English, Français, Deutsch, עברית
Hlola ezinye izinketho ezise- Ganei Tikva namaphethelo